Eye Care – စာမကျြနှာ4– Healthy Life Journal
မျက်မှန်ခဏခဏ ပြောင်းနေရလို့ပါ . . .
မေး. ကျွန်တော့် အသက် ၄၀ ကျော်ပါပြီ။ အနီးမှုန်တာနဲ့ မျက်မှန်ဆိုင်ကနေ မျက်မှန်ဝယ်တပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆင်မပြေဘူး။ နောက်တစ်လက် ၀ယ်တပ်တော့လည်း ခဏပဲ။ နောက်တော့ အဆင်မပြေလို့ပါ။ ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ ခင်ဗျ။ Kyawzwar(FB) ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။...
မျက်စိညောင်းညာနေလျှင် လုပ်သင့်သည့် လေ့ကျင့်ခန်း ရှစ်မျိုး
လရိပ်မေ အသက်တွေကြီးလာတဲ့အခါ အမြင်အာရုံတွေ ယိုယွင်းလာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကွန်ပျူတာသုံးပြီး နာရီများများ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အခါအမြင်အာရုံထိခိုက်မှုပိုသိသာလာပါတယ်။ တစ်နေ့တာလုံးအချိန် ကြာကြာ အလုပ်လုပ်ပြီးချိန်မှာ မျက်စိညောင်းညာလာတယ်ဆိုရင် စိတ်မပူပါနဲ့။ သက်သာစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေရှိပါတယ်။ (၁) အနီးအဝေးဆုံချက်ကျအောင် ကြည့်ခြင်း မတ်တပ်ရပ်ရင်း ဒါမှမဟုတ် ထိုင်ရင်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။...
မျက်စိက ပြသနေသည့် ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေး
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို သိနိုင်ဖို့ မျက်စိကို စမ်းသပ်ကြည့်ရှုလို့ ရပါသလားဆရာ။ ဖြေ. လူတစ်ယောက် သွေးအားနည်းရောဂါ ရှိ၊ မရှိ ဆိုတာ သိဖို့ဆိုရင် မျက်မြှေးကို လှန်ကြည့်လေ့ရှိပါတယ်။...
၊ လရိပ်မေ ၊ မျက်ကွင်းညိုတာကို သင့်အနေနဲ့ အလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်က ညဘက်မှာညဉ့်နက်တဲ့အထိအပြင်မှာလည်တတ်သူလား၊ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်ကနေ နောက်ကျမှ ပြန်လာရသူလား။ ဒီလိုဖြစ်နေရင်တတ်နိုင်သမျှ အိမ်ကို စောစောပြန်ရောက်အောင်ကြိုးစားပြီး ရောက်တာနဲ့ အိပ်ရာဝင်သင့်ပါတယ်။ သင်က နေရောင်ခြည်အောက်မှာ အလုပ်လုပ်ရသူဖြစ်နေရင် နေရောင်ခြည်နဲ့ထိတွေ့မှုကြောင့် အသားအရေ...
သက်ကြီးရွယ်အိုတို့ မျက်စိအမြင်အာရုံ ဆုံးရှုံးရသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းများ
ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း (မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ရန်ကုန် မျက်စိဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ အရွယ်ရောက်တဲ့ လူကြီးတွေမှာ ဘယ်လို အကြောင်းအချက်တွေကြောင့် မျက်စိအမြင်အာရုံထိခိုက်မှုဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ ။ လူကြီးတွေမှာ အသက်ကြီးလာတာကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့(၁)အတွင်းတိမ်ရောဂါ၊ (၂) ရေတိမ်ရောဂါ၊...
မျက်စိ ခဏခဏ စွံတတ်သူ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါ . .
မေး ။ ကျွန်မက ငယ်ငယ်လေးကတည်းက မျက်စိခဏခဏစွံတတ်တယ်။ အခုတော့ သိပ်မဖြစ်တော့ဘူး။ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါမှာ မျက်စိတွေ ယားလာတာ၊ ရောင်လာတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါ ဆရာ။ မီးအလင်းရောင်စူးစူးထိုးလိုက်ရင်လည်း ရုတ်တရက်ဘာမှမမြင်တော့သလို ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း(မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေ ။ မျက်စိစွံတယ်ဆိုတာက...
မေး ။ ကျွန်တော်က မွေးရာပါ မျက်လုံးအားနည်းပါတယ်။ အလင်းရောင်များလွန်းတာ၊ အပူဒဏ်ပြင်းတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ တစ်ခါတလေ မျက်လုံးတောင်ဖွင့်ဖို့ ခက်ခဲတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိအားကောင်းအောင် မျက်စိအားဆေးကို ပုံမှန်သောက်ပါတယ်။ ရေရှည်မှာမျက်လုံးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုဂရုစိုက်သင့်တယ်ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ပါမောက္ခဦးတင်ဝင်း(မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ...